Jikada Rhythmic | Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward
Aqoon-isweydaarsiga Muusikada Festa <Xagaaga>	Jikada qallafsan ~ Laga bilaabo 0 sano ilaa dadka waaweyn ~ Aynu helno adduun cusub oo leh muusig
Aynu karino suxuunta dhawaaqa iyo laxanka!
Maacuunta jikada ee aad marwalba isticmaasho ayaa loo beddelay qalab muusiko oo madadaalo leh!
"Aqoon isweydaarsiga muusikada" ee Tokyo Bunka Kaikan wuxuu ku dhashay rabitaan sidan ah "Waxaan rabaa in dad badan intii suurtagal ah inay si fudud ugu raaxaystaan ​​cajaa'ibka muusigga."Aqoon-isweydaarsigan, oo qof kasta laga bilaabo carruurta ilaa dadka waaweyn ayaa ka qaybqaadan kara, waa barnaamij waxbarasho oo ka qaybqaadasho ah oo kobciya hal-abuurka iyo iskaashiga muusikada iyada oo lala kulmayo ku-raaxeysiga muusikada ka gudbaya noocyada.
Faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus awgeed, booqashadii Hogaamiyaha Casa da Musica Workshop ee Japan ayaa la baajiyay.Sababtaas awgeed, "Jikada Rhythmic" ee loo qorsheeyay Sabtida, Luulyo 7-keeda ayaa la qaban doonaa.Hogaamiyaha Workshop Tokyo Bunka Kaikan ayaa soo muuqan doona.Fadlan ogow in wax lacag celin ah aan lagu siin doonin isbedelkan.
Sabti, Maarso 2021, 07
19: 00-20: 00 (18: 30-19: 00 soo dhaweynta)
* Soo dhaweynta qolka carwada
Hoolka Yar ee Ota Ward Plaza
Muxaadarooyin / Aqoon isweydaarsiyo (Kale)
Hogaamiyaha Aqoon-isweydaarsiga Casa da Musica
Tokyo Bunka Kaikan Hogaanka Aqoon isweydaarsiga
Taariikhda la sii daayo: Maajo 5-keeda (Arbacada) 12: 10 ~
* Taariikhda sii deynta way isbadali kartaa iyadoo kuxiran xaalada cudurka ee coronavirus-ka cusub.
Xaaladda isbeddelka, waxaan kugula socodsiin doonnaa Tokyo Bunka Kaikan iyo degelkeenna.
Booska soo dhaweynta Boos celinta 03-3750-1555
Ota Citizen's Plaza, Aprico, Ota Bunkanomori, daaqad kasta / soo dhaweyn taleefan kasta waxay ka bilaabantaa 14:00 taariikhda bilaabashada boos celinta.
* Ma jiro tigidh la socda
Ardayda dugsiga hoose ilaa dadka waaweyn
Qiyaastii 30 qof
Adeegga Tigidhada Xarunta Dhaqanka ee Tokyo (TEL: 03-5685-0650)
Ku saabsan kaqeybgalka aqoon-isweydaarsiga (fadlan hubi inaad aqriso)
Fanaaniinta / faahfaahinta shaqada
La wada kafaala qaaday
Tokyo Metropolitan Foundation ee Taariikhda iyo Dhaqanka Tokyo Xarunta Dhaqanka / Golaha Dhaqanka Tokyo
Kaabista Kordhinta Farshaxanka Dhaqanka ee Wakaaladda Arimaha Dhaqanka (Mashruuca Dhiirrigelinta Waxqabadka ee Tiyaatarada, Hool-wadayaasha, iwm.) | Golaha Fanka ee Japan
Aqoon-isweydaarsiga Muusikada Festa <Smermer> waxaa la qabtaa Khamiista, Luulyo 7keeda ilaa Axadda, Luulyo 15keeda.
Fadlan hoos ka eeg seminaaro la xiriira.
Aqoon-isweydaarsiga Muusikada Festa <Xagaaga> Qorista Ka-qaybgalayaasha